Slovenia ga-abụ isi obodo njem nlegharị anya ọhụrụ nke Europe
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Slovenia » Slovenia ga-abụ isi obodo njem nlegharị anya ọhụrụ nke Europe
Njem njem • Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • culinary • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Resorts • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ kacha ọhụrụ na Slovenia • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Slovenia ga-abụ isi obodo njem nlegharị anya ọhụrụ nke Europe.
Mgbasa ozi ndị njem nlegharị anya nke Slovenian na nso nso a ebutela ebe a na-aga ndụ site n'ilekwasị anya na njem nlegharị anya njem, ịma mma eke na ogige ntụrụndụ mba.
27% nke ndị zara ajụjụ nyocha ahụ kwuru na ha na-edekarị ezumike njem njem.
'Agba ọsọ na egwuregwu' bụ ụdị ezumike nke ise kachasị ewu ewu, ma nwee mmasị na ndị ọbịa ọdịnala Slovenia: Czechs na ndị Dutch.
Ọtụtụ ndị njem nlegharị anya na-agụsi agụụ ike maka oghere oghe, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ka ọnwa gachara n'ụlọ.
Site na mkpọsa njem nlegharị anya mba ụwa na nso nso a na-elekwasị anya na njem nlegharị anya, Slovenia na-atụ anya ịhụ njem nlegharị anya na-arị elu ruo nde mmadụ 5.7 bịarutere na 2024, mmụba 22% na ọkwa tupu ọrịa ọrịa.
Dị ka ndị nyocha ụlọ ọrụ njem si kwuo, 'njempụ na egwuregwu' bụ ụdị ezumike nke ise kachasị ewu ewu, yana ndị ọbịa omenala Slovenia nwere mmetụta pụrụ iche: Czechs na Dutch.
Slovenia bụ ebe obibi nke ụfọdụ odida obodo kacha dị ịtụnanya na Europe mana ọ gaferela ọtụtụ ndị njem nlegharị anya n'ụzọ dị ịtụnanya. Otú ọ dị, ndị Ndị njem njem nleta SlovenianMgbasa ozi n'oge na-adịbeghị anya ebutela ebe a na-aga ndụ site n'ilekwasị anya na njem nlegharị anya njem, ịma mma eke na ogige ntụrụndụ mba.
Na nyocha ụlọ ọrụ na nso nso a, 27% nke ndị zara ajụjụ kwuru na ha na-edekarị ezumike njem njem. Njem njem nlegharị anya pụtakwara ebe niile na ụfọdụ n'ime SloveniaIsi ahịa isi mmalite dị ka Czech Republic na Netherlands, yana 40% na 32% nke ndị zaghachirinụ na-achọpụta na nke a bụ ụdị ezumike ha na-edekarị.
Oge mgbasa ozi Slovenia dị mma. Ọtụtụ ndị njem nlegharị anya na-agụsi agụụ ike maka oghere oghe, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ka ọnwa gachara n'ụlọ. Ọchịchọ a na-achọsi ike maka njem nlegharị anya ga-ahụ njem nlegharị anya mba ụwa na-agbake ngwa ngwa Slovenia karịa ụfọdụ ebe ndị ọzọ na Europe.